AMISOM: Adeegayaasha Minjo-xaabinta Israaca Soomaliyeed!! |
Dhamaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay allaah (SWT) ee nagu manaystay nimcooyin badan oo aan xisaab lahayn iyo rasuulkiisii suubanaa Muxamed (CSW). Intaa kadib waxaan salaamayaa guud ahaan Muslimiinta, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed.
Asallaamu calaykum warmatullahi wabarakatuh.
Ciidamada loogu magac daray nabad ilaalinta ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Amisom( African mission for Somalia ) waxa ay wadanka soomaliya soo galeen dabaqayadii sanadkii 2007 iyagoo oo markaas mandatekooda lagu sheegaya inuu yahan nabad ilaalin oo kaliya iyo sugida madaxda qaranka iyo waliba waardiyaynta goobaha muhiimka ah ee ay kamid ka yihii madaxtooyada ,xarunta barlamaanka iyo airprortka Adan cade.
Hadaba iyada oo laga jooga jooga tan iyo markii dalka ay yimadeen mudo ku siman sagaal sano waxaad mooda in Ciidamada Amisom ay baal maraeen hawshii loo xil saaray ee ay markii horeba kusoo galeen dalka,Amisom waxaa ay ku dhex milmeen siyaasada dalka iyaga oo ka mid noqday dhibaatooyinka uu dalka ka dagi la,a yahay. Waxa lagu ogaa nabad ilaalin waxay isu badaleen qas wadayaal iyagoo si bareer u dila dadka shacabka ee aan waxba galabsan, waxay ku kaceen falal aadanaha ka dhanka ah sida kufsi iyo layn maato iyagoo baaburtooda qufulani maalin walba ay dariiq yada ku jiraan dadka shacabka si ula kac ah.
Waxaa iila hada aan cadayn xiliga ay ka baxayaan dalka ee ku egyahay mandatekooda macada tirade ciidanka ee ka hawl gala dalka inta uu yahay sidoo kale waxaan la aqoon cida rasmiga ah ee ay ka amar qaatan amay hoos tagaan. Awal hore hawl galkoodu waxaa uu koobna caasumada qaranka hada waxaa ay ku baaheen badi gobolada dalka, waxaa ay isku hawleen in ay meelo nabdoon ka abaabulaan dagaalo iyo isku dhacyo cusub si mashruuca ugu sii balaarto mushaarka iyo tirade ciidankana loogu badiyo.
Waxa ay lacago farabadan ku helaan shaatiga soomaliyeed iyo in ay soomaliya u yihiin hiilo ugu soo gurmatay inay badbaadiyaan, waxaa ay noqdeen urur samafal iyagoo isbitaalo furay deeqana bixiya . waa yaabe waan la socona wadamada ay ka yimadeen taagtooda dhaqaale gormay wadamadaasi noqdeen deeq bixiyayaal?. Majirto cid daba gasha ama la xisaabtanta shaqooyinka ay dalka ka hayaan waxaa ayna si madax banaan u fuliyaan hawl galo iyaga u gaar ah oo aan madaxda soomalidu la socon,waxaa ay ka qayb galaan shirarka caalimaga ee soomalida loogu qabto daafaha caalamka si lamid ah maamulada dalka iyo madaxda dawlada dhexe.
Waxa ay heleen awood xad dhaaf ah iyagoo ku takri fala hantida ay magaca soomaliyeed ku heleen waxaana la sheegaa in askari walba uu mushaar ahaan u qaato $1028 oo ay usii weheliyeen gunooyin,daryeel iyo waliba qalab casriyaa oo ay ku gaashaaman yihiin oo yarayn kara khatartooda dhimasho iyo dhaawac, halka askariga soomaliyeed uu u qaata mushaar ahaan $100 dollar oo aan joogta ahayn maa jirto wax daryeel oo u helo askariga soomaliyeed hadii uu ku dhawaacmo inta uu ku gudo jiro hawasha qaran.
Hadaba sidee suuro gal ku tahay dalka noocaas ahi inuu helo dawlad xoog leh oo xor ah hadiiba aanay jirin waxa gacanta ugu jira dadkii dawlaadaas loo dhisi lahaa,maxaase u noqon kara dal siyaasad ahaan,maskax ahaan iyo ciidan ahaanba aan madax banaanayn inuu noqda mustaqbal dhow iyo kan fogba.
Hadiise ciidii ku haysatay ee ku gumaysanaysay aad mgan uga tahay kana doonaysid xoriyad suuro gal ma tahay inaad xorowdo. Waa halkii uu ka lahaa Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam alle ha u naxariistee;
In xornima la doona, Dawadeena weeye
Halkee baan ka doonaa, Laga doone heedii
Markii horeba duudsiiyay, Idoon markaan dhaho
Soo ma ahan dirashada, Duxda aan ka sugayaa
Digashadii waraabaha, Hal irmaan intuu dilay
Horadadii dibnaha iyo, Labadii danbeed cunay
Nirigtii dibnaha jiray, Isku soo duwee yiri
Halkee tani ka darartaa,Maxayse tani ka nuugtaa
Hamiga ah in amisom soomaliya xasiliso waa hungo iyo riyo maalmeed aan waxba ka soo naaso cadayn,xaqiiqaduna ma aha nabad ilaalin iyo sida la inoo ku sheegaya ee waaa sidan; A(adeegayashaa), M(minjoxaabinta),I(israaca) , SOM(soomaliyeed), waana taalabo ku gudban helida dawladnimo taabo gal ah oo ay soomaliya hesho.
Waa mashruuc dibin daabyo oo aan lahayn meel uu ku dhamaado ilaa iyo in ujeedoyin dahsoon oo aanan ogayn lagu gaaro mooye,waa gumaysi dadban oo marmarka qaar ay soo daahirto damac yadiisa dahsoon.
Haddii aan xisaabino halka askari oo Amisomka ah wuxuu la mashuur yahay 10 askari oo soomaliyeed,hadii askari walba oo Amisom ah uu mushaarkiisu yahay $1028 tirada askartooduna tahay inta la hubo 22000. Waxaa isku dhuftaa $1028*22000=$22616000 million,taas macnaheedu wuxuu yahay kharashka ku baxaa waa $2261600 oo million.
Qiyaas hadii lacagtaas lagu kharas geeyo dhisida ciidan qaran oo soomaliyeed oo askari walba uu si toos ah mushaar ahaan ugu qaato $100 dollar, waxaa ay noqonaysaa in soomliya ay yeelato ciidan dhan 200,000 kun oo askari ayadoo askari walba uuu qaadanayo mushaar ahaan $113.08 dollar.
Waxaa halkaas ka cad in meesha aysan jirin qaranimo soomaliyeed oo la rabo in la dhiso in la wax yeelo oo la burburiyo mooye, waayo soomaliya oo dhan waxa ugu badnaan ku filan 30,000 oo askarii oo soomaliyeed tababar fiicana qaba mushaar fiican qaata, marka hadii beesha calaamka iyo wamadama la magac baxay deeq bixiyayaalka Ilaahay baa deeq bixiya ahe inay soomaliya caawinayaan oo dawlad u dhisayaan waa in ay noo dhisaan ciidan tiro iyo tayo leh oo soomali ah.
Gunti iyo gabagabadii waxaan kuso afmeeraya qormada waa in ummada soomaliyed ay u fahantaa in ciidamada shisheeya aysan inoogu iiman inay ina cawiyaan ama wax ina taraan oo inoo gargaaraan, ee wa mashuurc la inoogu talagalay oo an waligiis dhamaanayn, marka waa in ummada soomaliyed ay saas u garataa una kacdaa sidii ay uga gashaamayn lahayd dibin daabyada had iyo jeer lala daba socda ee khatar ku ah jiriteenkeena ummadnimo iyo dawladnimaba.
Tags: AMISOM: Adeegayaasha Minjo-xaabinta Israaca Soomaliyeed!!
Next post Xanuunka Maalinta Nakba oo Kale, Malaga Yaabaa Inay Soomaaliya Lasoo Gudboonaato?
Previous post Saameynta Qalliinka / Dooxidda Hooyada Uurka Leh!